माइग्रेन टाउकोको दुखाइ #Migraine • Health News Nepal
in Articles, Disease
माइग्रेन एक प्रकारको टाउकोको दुखाइ हो। जसले विश्वको १२% जनशक्ति लाई प्रभावित गरेको छ। विश्वभर क्रोनिक माइग्रेन १-२% मानिसमा पहीचान। क्रोनिक माइग्रेनलाई हेमीक्रेनीअल मिग्रैनी भनिन्छ। किनभने यसमा युनिलाटेरल ( टाउकोको एक तर्फी भाग ) मा दुखाई हुन्छ। तर बाइ लाटेरल ( टाउकोको दुवै तर्फी भाग ) दुखाई नि उतिकै हुने गरेको पाहिन्छ। माइग्रेनले थ्रोबिङ/पल्साटाइल टाउको दुखाइ निम्त्याउँछ, जुन प्रोड्रोमल र औरा विशेषताहरूसँग सम्बन्धित हुन्छ ।
माइग्रेन टाउको दुखाइ कस्तो प्रकारको टाउकोको दुखाइ हो?
यो न्यूरोलोजिकल बिमार हो। यो प्राथमिक टाउकोको दुखाइ हो, जहाँ रक्त परीक्षण र इमेजिङ परीक्षण सामान्य छ।
माइग्रेनले बालबालिका, किशोरकिशोरी र युवा वयस्कहरूलाई आक्रमण गर्न सक्छ। यसले व्यक्तिको कुनै पनि कार्य गर्न सक्ने क्षमतामा कमि ल्याउछ।
लक्षणहरूलाई प्रोड्रोमल, औरा, आक्रमण र आक्रमण पछिको चार चरणमा विभाजन गरिएको छ।
प्रोड्रोमल चरण सामान्यतया माइग्रेन आक्रमणको १-२ दिन अघि सुरु हुन्छ।
रोगीहरूले प्रोड्रोमल चरणमा निम्न लक्षण अनुभव गर्न सक्छन्।
मूड परिवर्तन, निराशा देखि उत्साह सम्म
• छिन् छिनमा खान मन लाग्नु
• घाँटी दुख्नु
• पिसाब बढी हुनु
• शरीर सुनिनु
• बारम्बार हाई आउनु
Aura माइग्रेन आक्रमण हुनु अघि वा माइग्रेन आक्रमणको समयमा हुन सक्छ। Aura छोटो समयको लागि हुन्छ । माइग्रेन रोगीहरु मध्ये लगभग १५-२०% मा औरा देखिन्छ।
औराको समयमा देखिने सामान्य लक्षणहरू
• चम्किलो थोप्लाहरू वा बत्तिहरु देखिनु
• दृष्टिमा कालो दागहरु देखिनु
• छाला लाटो हुनु अथवा झमझम हुनु
• बोली परिवर्तन।
• कानमा घण्टी बजिरहेको महसुस हुनु (टिनिटस)।
• छोटो अवधिको लागि दृष्टि गुमाउनु ।
• बांगो टिङ्गो रेखाहरु देखिनु
• गन्ध वा स्वादमा परिवर्तनको अनुभूति।
यो सामान्यतया ४ देखि ७२ घण्टा को हुन्छ । माइग्रेन आक्रमण व्यक्तिपिच्छे फरक हुन्छ। कसैमा महिनामा एकपटक मात्र त कसैमा बारम्बार पनि हुन्छ।
– दुखाइ सामान्यतया टाउकोको एक छेउमा हुन्छ, तर दुबै तिर पनि हुन सक्छ
– ब्लक ब्लक गरेर दुख्नु
– वाकवाकी आउनु अथवा आए जस्तो हुनु
माइग्रेन आक्रमणको अवधि पछि, बिरामीहरूले एक दिनसम्म अली फरक वा भ्रमित महसुस गर्न सक्छन्। कतिपय बिरामीहरूले खुसी महसुस गरेको रिपोर्ट गर्छन्। अचानक टाउको चलाउँदा छोटो समय फेरि दुखाइ हुन सक्छ।
क्रोनिक टाउको दुखाई कति बेला भन्छौ?
माइग्रेन टाउको दुखाइ महिनौंमा १५ दिन वा सोभन्दा बढी भएमा त्यसलाई दीर्घकालीन टाउको दुखाइ भनिन्छ। माइग्रेन लक्षणहरू बारम्बार परिवर्तन र गम्भीरता पनि हुन सक्छ । क्रोनिक माइग्रेन रोगीहरूले टाउको दुखाइ रोक्न १०-१५ दिन वा सोभन्दा बढी औषधि लिन्छन्।
डाक्टरलाई कहिले भेट्ने?
प्रोड्रोमल, औरा, आक्रमण र पोस्टड्रोम सुविधाहरू सहित एपिसोडहरूको साथ माइग्रेन टाउको दुखाइ डायरी बनाउनुहोस्। प्रत्येक टाउको दुखाइको अवधिमा ट्रिगर गर्ने र राहत दिने कारक लेख्नुहोस्, किनकि यो व्यक्ति अनुसार फरक हुन्छ। टाउको दुखाइको लागि न्यूरोलोजिस्ट वा दुखाइ चिकित्सकलाई भेट्नुहोस्।
कहिले तुरुन्त वा आकस्मिक डाक्टरमा जाने?
यदि टाउको दुखाइ गम्भिर छ भने, त्यस अवस्थामा तपाईंको मस्तिष्कमा केही घातक चीजहरू हुन सक्छ, त्यसैले तुरुन्तै डाक्टरलाई भेट्नुहोस्।
टाउको दुख्ने गम्भिर लक्षणहरु :
• एक अचानक, गहिरो टाउकोको गर्जन जस्तै
• ज्वरोसँगै टाउको दुख्नु, घाँटी अडिग हुनु, अलमल हुनु, चोटपटक लाग्नु, दोहोरो दृष्टि हुनु,
शरीरको कुनै भागमा सुन्निने वा कमजोरी हुनु, जुन स्ट्रोकको संकेत हुन सक्छ
टाउकोमा चोट लागेपछि टाउको दुख्ने
• टाउको दुखाइ जुन खोकी, परिश्रम पछि झन् खराब हुन्छ।
• ५० वर्षपछि नयाँ टाउको दुख्ने
माइग्रेन टाउको दुखाइको लागि सामान्य ट्रिगरहरू के हुन्?
१. हार्मोनल उतार-चढ़ाव : यो विशेष गरी महिलाहरूमा हुन्छ, महिनावारी र गर्भावस्था अघि। हर्मोनल गर्भनिरोधक चक्कीहरूले टाउको दुखाउन सक्छ र यसलाई अझ खराब बनाउन सक्छ।
२. पेय: रक्सी विशेष गरी रक्सी र अत्यधिक क्याफिन जस्तै धेरै कफी पिउने।
३. तनाव: कार्यस्थल वा घरमा तनावले टाउको दुख्न सक्छ।
४. संवेदी उत्तेजना, उज्यालो वा चम्किलो बत्तीहरूले माइग्रेनहरू उत्प्रेरित गर्न सक्छ, जस्तै चर्को आवाजहरू हुन सक्छ। कडा गन्ध जस्तै: परफ्यूम, पेन्ट थिनर, सेकेन्डह्यान्ड धुवाँ र अन्य – केहि व्यक्तिहरूमा माइग्रेन ट्रिगर गर्दछ।
५. निद्रा परिवर्तन, कम सुत्दा वा धेरै सुत्दा
६. भौतिक कारकहरू: तीव्र शारीरिक परिश्रम, यौन गतिविधि
७. मौसम परिवर्तन: जलवायु परिवर्तन वा ब्यारोमेट्रिक दबावले माइग्रेनलाई उत्प्रेरित गर्न सक्छ।
८. औषधिहरू: अत्यधिक दु:खाइ कम् र भासोडिलेटरहरू, जस्तै नाइट्रोग्लिसरीन, माइग्रेन बढाउन सक्छ।
९. खानाहरू: पुरानो चीज र नुन र प्रशोधित खानाले माइग्रेन ट्रिगर गर्न सक्छ। त्यसैले खाना छोड्न सक्छ।
११. फूड एडिटिभहरू जस्तै: स्वीटनर एस्पार्टम र प्रिजरभेटिभ मोनोसोडियम ग्लुटामेट (MSG) को लागि।
धेरै कारकहरू छन्, जुन माइग्रेनसँग सम्बन्धित हुन सक्छ।
पारिवारिक ईतिहास: यदि परिवारका कुनै सदस्य माइग्रेनबाट प्रभावित भएमा परिवारका अन्य सदस्यमा माइग्रेन हुने सम्भावना बढी हुन्छ।
उमेर: माइग्रेन जुनसुकै उमेरमा हुन सक्छ। सामान्यतया यो किशोरावस्थामा हुन्छ र यो ३० को दशकमा चरम हुन्छ, बिस्तारै यो कम बारम्बार र वृद्ध उमेर मा कम गम्भीर हुन्छ।
लिंग: महिलाहरु माइग्रेन टाउको दुखाइ संग महिला र पुरुष अनुपात ३:१ संग प्रभावित छन्।
हर्मोनल परिवर्तनहरू: महिलामा माइग्रेन महिनावारी अघि वा महिनावारी सुरु भएको समयमा हुन सक्छ। यो गर्भावस्था वा रजोनिवृत्तिको समयमा पनि हुन सक्छ। रजोनिवृत्ति पछि माइग्रेन सामान्यतया सुधार हुन्छ।
माइग्रेन जर्नल के हो?
माइग्रेन डायरी राख्दा यसले बिरामी र स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूलाई टाउको दुखाइको निदान गर्न मद्दत गर्नेछ। यो माइग्रेन आक्रमण हुनु अघि, समयमा, र पछि सकेसम्म विस्तृत र अपडेट हुनुपर्छ।
निम्न ट्रयाक राख्न विचार गर्नुहोस्:
• माइग्रेन सुरु भएको मिति र समय – प्रोड्रोम देखि पोस्टड्रोम सम्म समावेश गर्नुहोस्।
• तपाईका विशिष्ट लक्षणहरू के हुन्?
• यो हुनुभन्दा अघिल्लो रात तपाईंले कति समय सुत्नुभयो र तपाईंको तनावको स्तरलाई ध्यान दिनुहोस्। तपाईको तनावको कारण के हो?
• मौसमलाई ध्यान दिनुहोस्।
• के तपाईंले माइग्रेन सुरु गर्ने कुनै चीज खानुभएको छ? के तपाईंले खाना मिस गर्नुभयो?
• दुखाइको प्रकारको वर्णन गर्नुहोस् र यसलाई १ देखि १० स्केलको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुहोस् जसमा ११ तपाईंले अनुभव गर्नुभएको सबैभन्दा खराब पीडा हो।
• तपाईंको दुखाइको स्थान उल्लेख गर्नुहोस्। तपाईको टाउकोको एक छेउमा वा बङ्गारामा वा तपाईको आँखामा?
• टाउको दुखेको बेला तपाईंले लिनुभएको सबै औषधिहरूको सूची बनाउनुहोस्।
• तपाईंले आफ्नो माइग्रेनको उपचार कसरी गर्ने प्रयास गर्नुभयो र यसले काम गर्यो? तपाईले कुन औषधि, कुन समयमा लिनुभयो?
• अन्य ट्रिगरहरू विचार गर्नुहोस्। सायद तपाईंले घाममा फुटबल/क्रिकेट खेल्नुभयो? सायद तपाईंले एक चलचित्र हेर्नुभयो जुन फ्ल्यासिंग बत्तीहरू थिए? यदि तपाइँ महिला हुनुहुन्छ भने, तपाइँ तपाइँको महिनावारीमा हुनुहुन्छ?
माइग्रेन कसरी निदान गरिन्छ?
माइग्रेन टाउको दुखाइको निदान गर्न कुनै पनि रगत परीक्षण र इमेजिङ मद्दत गर्दैन। तर एक डाक्टरले गम्भिर प्रकारको दु:खाइ र सम्बन्धित लक्षणहरूको आधारमा टाउकोमा अन्य रोग भएको नभएको छुट्टाउन केही रक्त परीक्षण र इमेजिङ लेख्न सक्छ।
घरमै कसरी उपचार गर्न सकिन्छ ?
बिरामीले टाउको दुखाइको डायरी राखेर टाउको दुखाइको ट्रिगर थाहा पाउन यसबाट बच्नुपर्छ । माइग्रेन टाउको दुखाइको लागि सामान्य ट्रिगरहरू माथि उल्लेख गरिएको छ, हामीले त्यस प्रकारको ट्रिगरबाट बच्नुपर्छ। प्यारासिटामोल घरमै राख्नुहोस्, जसले धेरै रोगीहरूमा टाउको दुखाइ हटाउन फाइदा जनक हुन्छ। एक पटकमा १ ग्राम प्यारासिटामोल लिनुहोस्, प्रति दिन अधिकतम ४ ग्राम। घाममा नजाने । अँध्यारो कोठामा आराम गर्नुहोस्। साथै निद्राले धेरै बिरामीहरूमा टाउको दुखाइ कम गर्न मद्दत गर्दछ।
कुनै पनि ट्रिगरबाट बच्नुहोस्, जसले तपाईंलाई टाउको दुखाइको कारण बनाउँछ। माथि उल्लेखित सामान्य ट्रिगरहरू।
त्यहाँ दुई प्रकारका औषधि उपचारहरू छन्:
१. दु:खाइ कम् गर्ने औषधि: पारासिटामोल, इबुप्रोफेन, एस्पिरिन सामान्यतया टाउको दुखाइको घटनालाई रोक्न प्रयोग गरिन्छ। २.यदि टाउको दुखाइ गम्भीर छ भने कहिलेकाहीँ ट्रिप्टान समूहको औषधिहरू जस्तै रिजाट्रिप्टान, सुमाट्रिप्टन आदि लिन सकिन्छ।
यो औषधिले माइग्रेन एपिसोडहरूको frequency र गम्भीरता कम गर्न मद्दत गर्नेछ। प्रायः प्रयोग गरिने निवारक औषधिहरू हुन् – प्रोप्रानोलोल, फ्लुनारिजिन, भल्प्रोएट, टोपिरामेट, आदि।
टाउको दुख्ने एपिसोडहरू हटाउन औषधिको अत्यधिक प्रयोगले यसलाई क्रोनिक माइग्रेन बनाउन सक्छ। दुखाइ कम् औषधीको अत्यधिक प्रयोगले टाउको दुखाइलाई अझ खराब र chronic बनाउन सक्छ। साथै यदि हामीले समयमै यसको निदान गरेनौं भने, यो आफैंमा chronic टाउको दुखाइमा परिणत हुन सक्छ र यसले गम्भीरता पनि बढाउन सक्छ। जसले अन्ततः दैनिक गतिविधिहरूमा बाधा पुर्याउन सक्छ। साथै दीर्घकालीन रूपमा, यसले anxiety र depression जस्ता मनोवैज्ञानिक रोग निम्त्याउन सक्छ।
✍️ Dr. Tirth Raj Bhandari
Fellow (Interventional Pain Physician, FIPM)
Anesthesiologist (National Trauma Center)
Tags: Corona Virus #Covid19Dr. Tirtha Raj BhandariMigraine
स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ: प्रत्येक पालिकामा यो वर्षभित्र अस्पताल बन्ने